Amalaptop ashibhile angcono kakhulu - Sikusiza ukuthi wonge
Ngaphansi kuka- € 500
Ngaphansi kuka- € 1000
Amageyimu angaphansi kuka-€ 1000
Inani elingcono kakhulu lemali
Iyiphi i-laptop ongayithenga?
I-laptop ye-Ryzen 5
I-laptop ye-Ryzen 7
Thinta ikhompuyutha ephathekayo
Alukho uhlelo lokusebenza
I-notebook encane kakhulu
Amalaptop ashibhile angcono kakhulu
Siqhathanisa futhi sihlaziye amalaptop ashibhile ngokuya ngezici ezithile ukuze uthole angcono kakhulu ngekhwalithi namanani.
Izidili Zanamuhla Kumakhompyutha Aphathekayo Ashibhile
Ukuthenga enye yamalaptop ashibhile kufana nokuthenga imoto. Kufanele wenze ucwaningo lwakho futhi izikhathi eziyisishiyagalolunye kweziyishumi udinga "ukuziphendulela" ngaphambi kokuzibophezela ukuyisa ekhaya, njengoba okulungile kumakhelwane wakho kungase kungalungile kuwe. Ngaphambi kokuthi ucabange ukuthi iyiphi imodeli ongathanda, kufanele ucabangele izindleko zayo kanye nesabelomali onaso..
Ukuze ukhululeke, senze ingxenye enzima kakhulu yomsebenzi, siqoqa kulesi sihloko best laptops ezishibhile. Sifake imodeli yazo zonke izidingo, ngakho-ke kungakhathaliseki ukuthi uzoyisebenzisela ini, ngokuqinisekile uzothola efanelekile kuwe.
I-ASUS 15 F515JA-BR1840 -...
I-Acer TravelMate P214-53 -...
I-HP 15s-eq2117ns -...
I-Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 -...
Uma namanje ungazi ukuthi iyiphi i-laptop eshibhile oyifunayo, ngezansi unochungechunge lweziqondiso zokuthenga ezizokusiza ukuthi ukhethe ngokusekelwe kuzici ozifunayo:
Intengo engcono kakhulu yekhwalithi ye-laptop
Ikhompyutha ephathekayo yokudlala ingaphansi kwama-euro ayi-1000
Amalaptops angaphansi kwama-euro angama-1000
Amalaptops angaphansi kwama-euro angama-500
Amakhompyutha aphathekayo ngohlobo
I-laptop ye-Linux. Iyiphi ongayithenga?
Amakhompyutha aphathekayo angu-2-in-1
Amalaptops angenawo uhlelo lokusebenza
Amakhompyutha aphathekayo ngomkhiqizo
Ama-laptops amahle kakhulu
Ikhompyutha ephathekayo ye-Xiaomi
Amalaptops ngokuya ngesikrini
I-laptop engu-13 inch
I-laptop engu-14 inch
I-laptop engu-15 inch
I-laptop engu-17 inch
Amalaptops ngokuya ngokusetshenziswa ofuna ukukunikeza
Ikhompyutha ephathekayo yokuklanywa kwemidwebo
Iyaphatheka ukuhlela ividiyo
Ngesabelomali se-€ 500 kanye ne-€ 1.000, lesi siqhathaniso sizokusiza ukhethe ngokuvumelana nezidingo zakho.
Uma ungenalo ikilasi ukuthi iyiphi ongayithenga, sikwenze waba nguwe umhlahlandlela ophelele ngakho ungakhetha iyiphi i-laptop ongayithenga ngokuchofoza isixhumanisi.
Amalaptops ashibhile angcono kakhulu ka-2021
Hhayi-ke, ngaphandle kokuchitha isikhathi, ake siqale ngamalaptop ashibhile angcono kakhulu ka-2021. Ukwenza uhlu, asizange sicabangele kuphela intengo, kodwa futhi nokuklama, ukucaciswa kwezobuchwepheshe nezinye izici eziningi.
Bheka ukunikezwa okuhle esikutholile kancane ngezansi ngoba le modeli kufanelekile ukucatshangelwa, ngenxa yalesi sizathu siyibeke kuqala. Yincwajana encane futhi ethule. Cishe isetshenziswa kangcono njengekhompuyutha ephathekayo yesibili noma njengekhompuyutha ephathekayo yomsebenzi yabafundi nochwepheshe. Uthola lokho okukhokhelayo, ngakho-ke kungcono ungalindeli isivinini noma ukusebenziseka. Kodwa-ke, naphezu kokuba ilaptop eshibhe kakhulu kulolu hlu, ipakisha izici ezithile ezihlaba umxhwele.
I-CHUWI HeroBook 14.1 '...
Okuhlaba umxhwele kakhulu yi-64 GB yayo, lesi isici esihle amakhompyutha aphathekayo amaningi esiwafakile kulolu hlu ashodayo. Kufanele ucabange nge-CHUWI HeroBook njengempendulo ye-Microsoft ku-Chromebook. Uma ungazwani nohlelo lokusebenza lwe-Chrome futhi ujwayele ukusebenzisa Windows 10, khona-ke lena ngenye yamalaptop ashibhile aphuma kuMicrosoft.
Le khompyutha kungaba kuhle kakhulu ukusetshenziswa okulula kwansuku zonke: phenya i-inthanethi, sebenzisa i-Microsoft Office (efana ne-Word ne-Excel), lawula futhi ubuyekeze amanethiwekhi omphakathi, sebenzisa amasevisi okusakaza amavidiyo ...)
Ingenye yamalaptop ashibhe kakhulu kulolu hlu, kodwa lokho akusho ukuthi ayinamandla. Ukusetshenziswa kwansuku zonke kuzokunikeza a impilo yebhethri ende impela, ukucutshungulwa okusheshayo Futhi ungadlala ngisho nemidlalo yevidiyo elula (ngokuba inkimbinkimbi iba mfushane kodwa uma ufuna i-laptop yengane, lena inketho enhle, ngithembe).
I-Lenovo S145-15IWL -...
Ngokuhlangenwe nakho kwethu, i-drawback enkulu yale laptop ukuthi ayinayo i-DVD drive. Kodwa-ke, lokhu sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba kumakhompyutha aphathekayo kulolu hlobo lwamanani, ngakho-ke ungakuvumeli lokhu kukubeke eceleni, njengoba isofthiwe eminingi ozoyidinga, njenge-Microsoft Office, ingathengwa njengendlela yokudawuniloda. , ayikho idiski. Nakuba, uma lokhu kuwukuphazamiseka ngempela kuwe, ungakhetha ukuthenga idrayivu ye-DVD yangaphandle ngemali engaphansi kwama-euro angu-30.
Ngaphandle kwalokho, ngenxa yobukhulu besikrini saso, ikhwalithi yaso kanye nezici ezishiwo ngenhla, lena ilaptop enhle yebhajethi eqinile.
I-ASUS VivoBook I-HD engu-15,6 intshi
I-Asus VivoBook kungenzeka enye yamalaptops ashibhile kakhulu asetshenziswa nsuku zonke kulolu hlu. Isiphenduke umthengisi ohamba phambili e-Amazon, futhi uma iqhathaniswa namanye amalaptops ebangeni lawo lamanani, singabona kalula ukuthi kungani.
I-ASUS VivoBook 15 ...
Izici esizifingqe ohlwini lwangaphambilini zijwayelekile kukhompyutha ephathekayo enendawo yonke, pho yini eyenza ikhetheke kangaka? Nokho, u-Asus ukhethe ukunikeza inani elingenakuhlulwa lemali nesibonisi se-HD nge Ikhadi lehluzo elihlanganisiwe le-Intel HD Graphics 620 kanye ne-v2 Dolby Advanced Audio ukuze ukwazi ukubukela i-TV noma imuvi enayo yonke ikhwalithi obuyilindele.
Lolu uhlobo lwe-laptop olunjalo ungasebenzisa kokubili umsebenzi kanye ne-multimedia. Nakuba ingeyona encane kunazo zonke futhi ingeyona ephathwayo kakhulu, kuselula kakhulu ukuyisusa usuka endlini uye ngaphandle futhi usuka ngaphandle uye ekhaya, usebenze ngayo Windows 10, bukela amamuvi nomabonakude noma udlale imidlalo yevidiyo elula. Ngalokho kubiza, ngiyaqinisekisa ukuthi kunjalo enye yamalaptop ahamba phambili kulolu hlu lwamanani emakethe.
Le laptop ishibhe kancane kunezinye ezinconyiwe, kodwa sinqume ukukufaka noma kunjalo ngoba kwezinye iziqondiso zekhompuyutha yesabelomali isifinyelele ezindaweni eziphezulu, yaze yabekwa kuqala ohlwini lwe-PC Advisor lwamalaptop athengekayo angcono kakhulu ka-2021. Ngakho-ke, ingabe kufanelekile ukukhokha leyo mali eyengeziwe noma kuwufanele ngalo modeli?
I-HP 14-cm0002ns -...
Sifake i-HP 14 ohlwini lwethu lwamalaptop alungele isabelomali angcono kakhulu ka-2021 ngoba ingathatha noma yini oyiphonsa kuyo (ngaphandle kwezitini) nokunye okwengeziwe.
Indiza ngokushesha kuzo zonke izinhlelo zokusebenza eziyisisekelo ezifana ne-Microsoft Office, ukuphequlula iwebhu ngokuvamile, izinsizakalo zevidiyo ezisakazwayo futhi ikuvumela ukuthi udlale imidlalo yevidiyo (yize singakhohlwa ukuthi ayizange yakhelwe lokho, ihamba kancane futhi. ihluzo ezekhwalithi ephakathi nendawo ephansi).
Kukho konke lokhu, siyakucabangela enye yamalaptops amahle kakhulu ebangeni lamanani ayo, njengoba ungayithola ngaphansi kwama-euro angama-300.
ILenovo Ideapad 530
Ukuba khona kwe-Lenovo Ideapad kulolu hlu kuyaxaka. Le notebook ine a Isikrini sokuthinta se-rotary LED, i-HD egcwele (1920 x 1080). Lokhu kusho ukuthi ungayibeka kumodi yokubuka uma ufuna ukubuka amavidiyo e-YouTube ngokunethezeka noma iyiphi imuvi.
Uyena inephrosesa ehamba phambili ohlwini, ngakho-ke inketho enhle impela uma ufuna ukusebenza kahle futhi ujabulele i-laptop engu-2-in-1 eguqulekayo.
ILenovo Yoga 530-14IKB -...
I-Lenovo Yoga ilula kancane kunamanye amakhompyutha aphathekayo, kodwa namanje ayikwazi ukufana nama-Chromebook esiwabuyekeza ngezansi mayelana nalokho. Inamandla kakhulu kunama-laptops esiwachaze ezigabeni ezedlule futhi, nakuba isikrini sokugoqa singase sibonakale singokwenziwa kancane, kuthiwa sisebenza kahle kakhulu ngenxa yokuthi thinta inhliziyo. Ngokuyisisekelo le modeli inokusebenziseka okufanayo njenge-Packard Bell EasyNote, kodwa enezici ezithile eziphakeme.
Amalaptops ashibhile angcono kakhulu ngokuya ngokusetshenziswa kwawo
269Izibuyekezo ezingu- XNUMX
I-Lenovo S145-15AST -...
15,6 "isikrini se-HD 1366x768 pixels
I-AMD A6-9225 Processor, i-DualCore 2.6GHz ifika ku-3GHz, 1MB
184Izibuyekezo ezingu- XNUMX
I-Apple MacBook Pro (13 ...
ISIZUKULU SESIKHOMBISA INTEL CORE.I5 DUAL-CORE PROCESSOR
Isikrini se-RETINA ESIKHANYA
I-INTEL IRIS PLUS GRAPHICS640 GRAPHICS
104Izibuyekezo ezingu- XNUMX
I-LG gram 17Z990-V -...
I-Ultralight, enesisindo esingu-1340 g kuphela nempilo yayo yebhethri efinyelela emahoreni angu-19.5, i-LG gram iyi-laptop engu-17 ethandwa kakhulu ...
Windows 10 Ushicilelo Lwasekhaya (i-64bit RS3) ukuze usebenze ngokushelela nakakhulu
Inkumbulo enwebekayo, i-512 GB SSD njengendinganiso ene-slot eyengeziwe ukuze ikhule ifike ku-2 TB; 8 GB RAM inkumbulo nge ...
244Izibuyekezo ezingu- XNUMX
IMicrosoft Surface Pro 7 -...
Isikrini sokuthinta esingu-12.3-intshi (amaphikseli angama-2736x1824)
Iprosesa le-Intel Core i5-1035G4, 1.1GHz
I-8GB LPDDR4X RAM
123Izibuyekezo ezingu- XNUMX
ILenovo Yoga 530-14ARR -...
Isikrini esingu-14 ", amaphikseli we-FullHD 1920x1080 IPS
I-AMD Ryzen 5 2500U Processor, i-Quadcore 2.5GHz kuze kufike ku-3.4GHz
Izincomo ngaphambi kokuthenga
Ngemuva komhlahlandlela ojwayelekile wamalaptop entengo angcono kakhulu, ungaba nentshisekelo kokuthile okucaciswe kakhulu. Kulokhu akufanele ukhathazeke, sinokuqhathanisa okuningana okuzokuthakazelisa.
Intengo engcono kakhulu yekhwalithi ye-laptop. Ukuqhathanisa okugcwele kancane okuqhathanisa ngokucophelela ikhwalithi nentengo yamanye amamodeli. Ukucabangela ukuthi ufuna ukuthola okuningi emalini yakho.
Ama-laptops wokudlala. Kulabo basebenzisi abafuna ukuthenga ikhompuyutha ephathekayo ukuze badlale imidlalo. Siklelise abadlali abaphezulu kukho kokubili okucaciswayo kanye nentengo ukuze uthole okuningi kuzithombe nokusebenza.
Ama-laptops amahle kakhulu. Uzobona ukuthi zonke izinhlobo ezifakwe lapha ziyaziwa ngakho-ke abawona amaShayina. Ungabona ukuqhathanisa okuphelele uma ufuna ulwazi olungcono mayelana nalokhu. Sikunikeza umbono ophelele okuyimikhiqizo ongayethemba. Ziyafana lezi esiziqhathanisayo ekhasini lethu ama-laptops ashibhile.
Ngokufika okukhulu kwe Windows 10, amakhompyutha aphathekayo ayanda futhi. Kodwa lesi akusona isizathu sodwa sale mpumelelo, futhi baye bathonya ukuthandwa kwe-Ultrabooks kanye nokwanda kwama-hybrids amabili-in-one asebenza njenge-laptop kanye nethebhulethi. Amakhompyutha aphathekayo ashibhile azuza amandla ngaphezu kwama-Chromebook ngenxa yamamodeli afana ne-HP Pavilion x2. Ngaleso sikhathi, amakhompyutha aphathekayo anamandla anele okudlala imidlalo nawo abona umthelela wawo ukhula futhi kubonakala sengathi azongena esikhundleni esihle samakhompyutha ethu edeskithophu.
Njengoba kunezinketho eziningi ezitholakalayo, ukukhetha ilaptop engcono kakhulu yezidingo zakho kuya ngokuya kuba nzimaKungakho kubalulekile ukuthi, okokuqala, unqume ukuthi uzokwenzani ngayo.
Uma ufuna ukukhetha ngokushesha futhi kalula i-laptop evumelana kangcono nezidingo zakho, sincoma lokho bheka kuleli khasi lewebhu.
Labo basebenzisi abalandela isikhathi sokuqalisa esisheshayo nekhompyutha engasindi ngoba befuna ukuhamba nayo baqinisekile ukuthi bazoyijabulela i-Ultrabook.. Ngakolunye uhlangothi, abadlali bamageyimu bazokhetha amakhompyutha aphathekayo ajwayelane nezidingo zabo zehluzo nezidingo zokucubungula, futhi labo abadinga idivayisi ehlinzeka ngokuguquguquka, bazokhetha inhlanganisela yezinto ezimbili kokukodwa.
Ekuqaleni, kungase kubonakale kunzima kakhulu - ngazo zonke lezo zinketho - kodwa inhloso yethu ukukusiza ukuthi uthole i-laptop ehamba phambili kunoma yini oyidingayo. Sikholelwe uma sikutshela ukuthi kukhona ikhompuyutha ephathekayo elungele wena. Ngalo mhlahlandlela, ngeke uwuthole kuphela, kodwa uzoba nesiqiniseko esingu-100% sokuthenga kwakho.
Ukuqhathaniswa kwamalaptops: Umphumela wokugcina
Ukuhlola esakwenza kwasiholela ekukhetheni abawine abathathu phakathi kwamalaptop ayi-10 ahlaziyweLawa amamodeli amathathu esiwafaka kulesi siqhathaniso selaptop.
El kuqala bahlukaniswa, owine Umklomelo Wegolide, nguyena HP Umona x360 de 13,3 amayintshi. Le laptop ine-Intel Core i7 processor enamandla kanye no-256GB we-SSD - enwebekayo ibe ngu-512 GB -. Ngaphezu kwalokho, isebenza nge-Windows 10, inokuzimela okungafika emahoreni angu-9 nemizuzu engu-28 futhi inesisindo esingu-1,3 kg kuphela.
I-HP Envy x360 13-ar0000ns ...
Kuliqiniso ukuthi usayizi ongu-13,3 inch akanaso isikrini esikhulu kunazo zonke emakethe, kodwa siyahambisana nokuphatheka kwaso. I-HP Specter x360 ihlanganisa izimbobo ezintathu ze-USB 3.0 ezikunikeza ukufinyelela okusheshayo kuwo wonke ama-peripheral e-USB. Le laptop ihambisana namakhadi e-SD nawe-HDMI. Umkhiqizi unikeza ifoni ye-inthanethi, ingxoxo kanye nesevisi yezobuchwepheshe, kanye nenkundla yezokuxhumana.
El Isigaba sesibili futhi owawina Umklomelo Wesiliva uchungechunge UDell Inspiron 5570 de 15 amayintshi. Isivinini sokuphrosesa sale nothibhukhi sihle, i-3,1Ghz, njengephrosesa yayo eyisisekelo, i-Intel Core i3, ikunikeza impendulo esheshayo. Okukhanga kakhulu ngale laptop ukuthi ungakwazi ukuthuthukisa ikhadi lezithombe libe yikhadi levidiyo le-AMD uma udinga ukusebenza ngezithombe ezichaza ngokucacile. Umthamo wayo wokugcina we-1.000 GB ku-hard drive wanele futhi ikunikeza indawo eningi yamafayela akho e-multimedia.
I-DELL EMC 7 V75G 39,62 cm ...
Isistimu yokusebenza, Windows 10, isebenza kahle. Inebhethri elihlala isikhathi eside elifinyelela amahora angu-5 nemizuzu engu-45, iqiniso liwukuthi lesi sici singathuthukiswa. I-Inspiron 5570 isinda kancane kunomnqobi wethu, 2.2 kg, lokhu, ngokwengxenye, kungenxa yesikrini sayo esingu-15-intshi. Njenge-HP Envy X360, ngenkathi sihlola i-Inspiron ekuhlolweni kokushisa, phansi kwayo kufinyelele ku-37.7 degrees, njengoba sesixoxile kakade, okungaphatheki kahle uma uyibambe emathangeni akho. Ukulungiswa kwesikrini okuyisisekelo ngamaphikseli angu-1920 x 1080, kodwa ungasithuthukisela ekulungisweni okuphezulu kakhulu, 3840 x 2160 - noma yini efanayo, a Isibonisi se-4K. Inezimbobo ezimbili ze-USB 3.0 kanye nembobo eyodwa ye-USB 2.0.
Ekugcineni, i indawo yesithathu futhi owawina Umklomelo Wethusi nguyena I-Acer Swift 5 de 14 amayintshi. Le modeli inesivinini sokucubungula esingu-3,4GHz, esikhulu impela kwikhompyutha ephathekayo kulesi sigaba. Ngezilinganiso zayo eziphelele ze-A-, idatha yethu yokusebenza ibonisa ukuthi iphrosesa akuyona into egcina le PC isendaweni yesithathu. Imodeli eyisisekelo ine-256GB SSD kanye nesistimu yayo yokusebenza Windows 10.
I-Acer SF514-52T Swift 5 -...
Isilinganiso sempilo yebhethri amahora angu-7 nemizuzu engu-36, engaphansi kwesilinganiso samakhompyutha aphathekayo esiwabuyekezile. Ukulungiswa kwesikrini okuyisisekelo ngamaphikseli angu-1920 x 1080, kodwa kungathuthukiswa kuye ku-2560 x 1440. Ukwengeza, i-Acer Aspire Swift inamachweba amabili e-USB 3.0 kanye nembobo eyodwa ye-USB 2.0.
Ukuqhathaniswa kungamamodeli avelele kakhulu, ngakho-ke amamodeli kubiza cishe u-€ 1.000. Uma unesabelomali esiqinile, bheka ukuqhathanisa kwethu amalaptop entengo yekhwalithi noma yethu ukubuyekezwa kwe-laptop eshibhile ukuthola eshibhe kakhulu.
Ukuze siqedele ngokuqhathanisa kwethu ikhompuyutha ephathekayo, sizochaza izinhlobo ezahlukene zamakhompuyutha aphathekayo uma kwenzeka ufuna ukwandisa ingxenye ngayinye kancane njengoba sinendatshana ehlobene.
Njenganoma yikuphi okunye ukuthenga okukhulu, lapho ucabanga ukuthola ikhompuyutha ephathekayo kuze kubalwe i-euro yokugcina. Kuyidivayisi ezohlala iminyaka embalwa, ngakho-ke sincoma ukuthi ubheke umhlahlandlela wethu wamalaptop aphambili ngaphambi kokwenza noma yiziphi izinqumo.
Eminyakeni embalwa edlule bekunama-laptops okusebenza kanye namalaptop asebenzayo. Namuhla, esikhundleni salokho, izinketho eziningana zesigaba ngasinye. Ake siqale ngezisekelo:
Lawa malaptop ngokuyisisekelo amadivaysi okumele ahlangabezane nezici ezithile zokuncipha, ukukhanya, amandla nosayizi isethwe iphrosesa ye-Intel, emzamweni wokusiza abenzi bekhompuyutha abathembekile beWindows abaqhudelana ne-Apple's 13-inch MacBook Air.
Ukuze i-laptop ye-Ultrabook imakethwe kanjalo, kufanele ihlangabezane nezicaciso eziqinile ezibekwe yi-Intel. Kumelwe ibe mncane, ayikwazi ukujiya (uma ivaliwe) kuno-20 mm kuzikrini ezingu-13.3-intshi noma 23 mm kuzikrini ezingu-14-intshi noma ezinkulu. Ngaphezu kwalokho, kufanele ibe nempilo yebhethri yamahora ayisithupha uma udlala ividiyo enencazelo ephezulu noma ayisishiyagalolunye uma ingenzi lutho.
Bheka i- Ukuqhathanisa okushibhile kwe-ultrabooks esinakho.
Ngeke kuthathe ngaphezu kwamasekhondi amathathu ukuthi i-Ultrabook iphume lapho ulele. Lawa makhompyutha aphathekayo ngokuvamile anama-hard drive nezici ezifana nemiyalelo yezwi nezikrini zokuthinta. Ama-Ultrabook aklanyelwe ukuphatheka nokusebenza engqondweni, kodwa anenani eliphakeme, ngokuvamile aqala ku-$900.
Umphumela ube ngothize Amalaptops asezingeni eliphezulu angenawo umona ngamalaptop we-Apple angcono kakhulu. Ama-Ultrabook amakhompyutha aphathekayo angaba ngu-2 amasentimitha ubukhulu, anempilo ende yebhethri nesibonisi esicijile, njenge-Dell XPS 13 noma i-Asus Zenbook.
ILenovo Yoga 920-13IKB -...
ILenovo Yoga (2021) akuyona nje ilaptop ezacile ngendlela emangalisayo futhi elula, kodwa iguquguquka ngokuphelele ezingeni lokuklama. Ukukhweza isikrini esingu-13,9-intshi ohlakeni lwamayintshi angu-11 akuyona into encane, kodwa iLenovo yenze isimangaliso sokwenza imonitha ngaphandle komphetho ocishe ungapheli. I-Yoga 910 futhi iyikhompuyutha ephathekayo enamandla kakhulu, eqinile enenani elinconywayo elithengekayo. Kukho konke lokhu sikubheka njenge-Ultrabook engcono kakhulu.
Ikhompuyutha ephathekayo yamageyimu iyilokho kanye okucabangayo - i-PC yabalandeli bangempela begeyimu yevidiyo. Ngamafuphi, azisetshenziselwa ukudlala i-Candy Crush noma Izinyoni Ezithukuthele, kodwa ukudlala imidlalo ye-PC esindayo ngempela edinga iphrosesa ephezulu, i-8GB kuya ku-16GB ye-RAM, ubuncane besitoreji esingu-1 TB kanye nekhadi lezithombe. okuyisici esibaluleke kakhulu. Amakhompyutha aphathekayo amageyimu ngokuvamile anezikwele eziningi futhi ukwakhiwa kwawo kuqine kakhulu kunamanye amakhompyutha aphathekayo, futhi isikrini sawo ngokuvamile sinokulungiswa okuphezulu.
Ungabona wethu ukuhlaziywa kwama-laptops amageyimu angcono kakhulu.
Amakhompyutha aphathekayo okudlala akudingekile ukuba zibe mncane noma zibe lula, njengoba ngokuvamile abadlali bawasebenzisa esikhundleni sekhompuyutha yedeskithophu. I-laptop yokudlala ikuvumela ukuthi udlale imidlalo efanayo neyekhompuyutha yedeskithophu, kodwa ngenzuzo yokuthi iphatheka ngokwanele ukusuka kwelinye igumbi ukuya kwelinye noma ukuyidlala endlini yomngane.
I-Acer Predator Helios 300 ...
Ezikhathini zamuva nje, amakhompyutha aphathekayo adlalayo enze inqubekelaphambili emangalisayo ezama ukuhlangana nozakwabo bedeskithophu. Ngalo mqondo, kubonakala sengathi isiphetho esinengqondo salokhu kuziphendukela kwemvelo ukuqala ukufaka izingcezu zedeskithophu kumalaptop emidlalo. Le modeli i-a Ikhompuyutha ephathekayo ephathekayo engu-15,6-intshi enamandla ngendlela emangalisayo, enephrosesa yedeskithophu enosayizi ogcwele kanye ne-GPU ehamba phambili yolayini etholakalayo. Ungase ucabange ukuthi le nhlanganisela ingenza ikhompuyutha ephathekayo enkulu, kodwa lena iyakwazi ukupakisha konke emzimbeni omncane.
Amalaptops Wabafundi Nomsebenzi
Amakhompyutha aphathekayo ebhizinisi afana namalaptop enhloso ejwayelekile okuxoxwe ngawo kwezinye izindatshana, kodwa ayafana yakhelwe kwikhwalithi ephezulu, izakhi zazo zihlala isikhathi eside futhi ngokuvamile zithengiswa ngeziqinisekiso ezinde futhi eziphelele. Akumele udinge ukushintsha i-laptop yakho yebhizinisi njalo ngemva kweminyaka embalwa ngoba iphelelwe yisikhathi.
Kulesi senzakalo sincoma le umfundi notebook guide.
Lezi zinhlobo zamakhompyutha aphathekayo aklanywe kucatshangwa ngokusebenza kwawo, anama-quad-core processors angakwazi ukuphatha kalula imisebenzi eminingana eyinkimbinkimbi ngesikhathi esisodwa njengoba kufanele ukwazi ukusebenzisa isofthiwe edingekayo ukuze wenze umsebenzi wakho, ngaphandle kokuthi ikhompuyutha ihambe kancane. Lawa makhompyutha aphathekayo ngokuvamile awanawo amakhadi amakhulu ezithombe, kodwa angengezwa uma umsebenzi wakho uhlanganisa izithombe noma ukuhlela ividiyo.
I-HP Pavilion 14-ce2014ns -...
I-HP Pavilion 14-ce2014ns ngezindlela eziningi ingase ifane ne-MacBook Air, kodwa iwumshini ongcono ngezindlela eziningi. Izacile, ilula, futhi ngendlela ekhangayo ngenxa yomzimba wayo we-aluminium. Ngaphezu kwalokho, le laptop nayo ine- Isibonisi esiphezulu se-Full HD, i-Intel Core i7 CPU kanye no-1TB wesitoreji se-HDD njengenketho. Kodwa-ke, into emangalisa kakhulu ukuthi ungakuthola konke lokhu ngama-euro angama-800, okuyenza ibe enye yamalaptop angcono kakhulu uma unesabelomali sabafundi.
Idizayinelwe cishe umsebenzi kuphela, yingakho igama lawo, lezi zincwadi zokubhalela ngokuvamile eziwugqinsi zinento eyodwa kuphela emqondweni: ukukhiqiza. Abathengisi ngokuvamile bahlomisa lawa mayunithi ngama-GPU ebanga lochwepheshe, njengochungechunge lwe-Nvidia Quadro noma ulayini we-AMD FirePro.
Ezinye izici zayo yilezi a izinhlobonhlobo ezibanzi zamachweba kanye nokufinyelela okulula kwabangaphakathi kunamanye amalaptop okuzijabulisa. Ingasaphathwa eyokufakwayo kwefa, njengezikhesa ze-TrackPoint, nezinketho zokuphepha zeleveli yehadiwe, njengezikena zeminwe. Njengezibonelo singabala i-Lenovo ThinkPad X1 Carbon kanye ne-HP ZBook 14.
I-Lenovo Ideapad ...
I-Lenovo Ideapad 330, ngenxa yobuhle bayo obusezingeni eliphansi kanye nomklamo oqinile, omangelengele, kuhle kakhulu konke okufunayo endaweni yokusebenza ephathwayo. Futhi, inikeza ochwepheshe ukulungiswa kwesikrini okuhle, impilo yebhethri ende, nokusebenza okuqinile, okuthembekile.
Uma kucatshangelwa ukuthi kubiza kusuka kuma-euro angama-900, kufanelekile ukukhokha lokho okwengeziwe kukho konke elikunikeza ochwepheshe abasebenza ngaphandle kwehhovisi.
Amalaptop amabili kwenye (ama-hybrid)
Uma ungomunye walabo abahlanganisa ukusetshenziswa kwekhompuyutha ephathekayo naleyo yethebhulethi, kungenzeka ukuthi idivayisi eyingxube ilungele wena. Inikwe amandla ngesistimu yokusebenza esetshenziswa kabili, iMicrosoft Windows 8Lawa madivaysi angaba ngendlela yamathebulethi lapho izinsiza zingaxhunywa khona ukuze zisebenze njengamakhompyutha aphathekayo, noma zingaba ngohlobo lwekhompuyutha ephathekayo ethatha isimo sethebhulethi uma ikhishwe kukhibhodi. Uyabona lapha isiqhathaniso sethu 2-in-1 amabhukumaka aguqulekayo uma uthanda kulawa mamodeli.
Kunjalo, umqondo uwukunikeza idivayisi engasebenza ngempumelelo kokubili njengethebhulethi kanye nekhompyutha ephathekayo, ukuze kungabi namagajethi amaningi kangaka endlini. Ukwethula la madivayisi emakethe akubanga lula, kodwa isibonelo esigqame kakhulu samandla awo yiMicrosoft's Surface Pro 3.
I-HP Specter x360 ...
I-HP Specter x360 13 akuyona kuphela idivayisi emangalisayo futhi eguquguqukayo kusukela kumkhiqizo we-HP kuze kube manje, i-laptop eyi-hybrid ephoqelela kakhulu emakethe. Ngemva kweminyaka yokucwengwa, le thebulethi entsha eyingxubevange evela ku-HP ibe nentuthuko ephawulekayo, njengesikrini esikhulu noma ukulungiswa okuphezulu. Ngaphezu kwalokho, ezinye izinto ezincane, njengehinge noma uhlobo lwekhava, zenziwe kabusha ukuze zenze i-HP Specter izinze kakhulu futhi kube lula ukuyisebenzisa.
Uzobona ikhompuyutha ephathekayo yamageyimu ngokushesha nje lapho uyibona: usayizi omkhulu, izibani ezikhanyayo, imidwebo egqamile, namafeni anyakazayo. Nakuba Ngenxa yokubukeka kwamamodeli azacile, alula futhi amahle kakhulu, njenge-Razer Blade noma i-MSI GS60 Ghost Pro, le paradigm isiqala ukushintsha..
Ukucindezela kulesi sixhumanisi Unokuqhathanisa okuphelele kumakhompyutha aphathekayo ongawadlala (umdlalo).
Ngokuvamile, ama-laptops amageyimu anjalo ifakwe ama-GPU akamuva eselula avela ku-Nvidia ne-AMD ukuze ukwazi ukudlala imidlalo yakamuva kanye noma ngabe udlale ngekhompuyutha yedeskithophu (Kunamanye amamodeli angashintsha ngokuqondile ikhompuyutha yedeskithophu).
Ama-laptops anenhloso ejwayelekile
Lolu hlobo lokugcina lwe-laptop kunzima ukuhlukanisa. Ziyimishini esalandela izindinganiso ezibekwe emashumini eminyaka edlule zalokho okufanele kube ilaptop, nakuba icwengisiswe kakhulu. Ngokucabangela konke lokho imakethe ye-laptop ezinikeze yona ngokwayo, ngokuvamile lawo akulesi sigaba athathwa njengamakhompyutha ashibhile noma aphakathi nobubanzi.
Lawa makhompiyutha aphathekayo ahluka ngosayizi wesikrini ukusuka ku-11 kuya ku-17 amayintshi futhi ngokuvamile awanazo izici eziningi eziphuma ngaphansi kwama-casing awo epulasitiki. Amakhompyutha ukwazi ukwenza imisebenzi yansuku zonke kodwa ziyasilela lapho unezidingo ezidinga kakhulu. Ngiyakukholwa lokho lokhu infographic Kuzokusiza kancane ukubona yonke into ngemidwebo.
Ngo-2014 iMacBook Pro engu-13-intshi ngokungangabazeki yayiyi-laptop ehamba phambili eyake yakhululwa yi-Apple. Imodeli ka-2021 ngandlela thize ishesha kakhulu futhi inikeza impilo yebhethri ende. Ngaphandle kwesibuyekezo sangaphakathi, iMacBook Pro ka-2021 13-inch izuze njengefa i-Force Touch trackpad esanda kwethulwa. Mhlawumbe i-Apple ayigqamile ngezinhlelo zayo zebhizinisi, kodwa ukuthola i-Mac kuyathandeka kakhulu uma ucabangela isofthiwe enikezayo nezibuyekezo zayo.
Ama-Chromebook angenye yamakhompuyutha aphathekayo amancane kakhulu futhi alula kakhulu emaketheKodwa abanawo amandla kanye nomthamo wokugcina wezincwadi zendabuko. Esikhundleni sesistimu yokusebenza ye-Windows noma ye-Macintosh, ama-Chromebook asebenza ku-Chrome OS ye-Google, eklanyelwe ngqo ukuphequlula i-inthanethi nokunye okuncane. Imvamisa, i-hard drive yabo incane kakhulu - icishe ibe ngu-16GB - isikrini sivamise ukuba amayintshi angu-11, futhi ngokuvamile banembobo ye-USB eyodwa.
Sinokuhlaziya okuphelele kokuqhathanisa kwe Ama-Chromebooks njengamakhompyutha aphathekayo amancane angcono kakhulu.
Nokho, akuvumela ukuthi ugcine izithombe, amavidiyo kanye namanye amadokhumenti ku-Google Drayivu esikhundleni sokubeka kusigcinalwazi sakho.. Ukulungiswa kwesikrini saso kuvamise ukuba ngamaphikseli angu-1366 x 768, okwanele ukuphequlula i-inthanethi nokubuka imuvi ngezikhathi ezithile. Futhi, ungahlala uxhuma isethi yama-USB ukuze ukhulise ukuxhumana.
Umphumela uwuhlelo olungasebenza kuzingxenyekazi zekhompuyutha ezisezingeni eliphansi, ukwenza ama-Chromebook ilungele izabelomali eziqinile noma ezabafundi. Kunjalo, ama-Chromebook asebenza kahle kakhulu ezindaweni lapho kunokufinyelela kwe-inthanethi okungenantambo, kodwa i-Google ithuthukise kakhulu ukusebenza kwayo okungaxhunyiwe ku-inthanethi kamuva nje. Ukuze uthole umbono wokuthi banjani, ungabheka i-Dell Chromebook 11 noma i-Toshiba Chromebook.
Ama-Netbooks afana nama-Chromebooks ngoba mancane kakhulu, awabizi, futhi alungiselelwe ukuphequlula iwebhu nokunye okuncane. Lawa makhompuyutha amabhukumaka awanayo idrayivu yokubona yokudlala ama-DVD nama-CD. Kodwa noma kunjalo, Ngokungafani nama-Chromebook, ama-netbook ngokuvamile asebenza kusistimu yokusebenza ye-Windows, noma owokugcina noma ngaphambili, abasebenzisi abaningi abajwayelene nakho.
Ungacindezela lapha ukuze ubone ama-netbooks ashibhile angcono kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, ama-netbook amaningi, anezikrini zokuthinta ezikhiphekayo namakhibhodi, asemngceleni phakathi kwamakhompyutha aphathekayo namathebulethi. I-netbook iyikhompuyutha ephathekayo enhle yalabo abathanda ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ukudlala imidlalo, kodwa bancamela ukuthayipha ngekhibhodi ebonakalayo.
Ingcono encane noma enkulu?
Noma ngabe isiphi isigaba sabo, amalaptop Ngokuvamile zingu-11-17 amayintshi ngosayizi. Isinqumo sakho mayelana nokuthi uthenge i-laptop kasayizi kamuphi kufanele isekelwe kulezi zici ezimbili: isisindo nosayizi wesikrini.
Okokuqala, usayizi wesikrini sakho sekhompuyutha ephathekayo uqonde ngqo inani lokuqukethwe elingakubonisa kanye nosayizi wakho, kunjalo. Kodwa-ke, kufanele futhi ukhumbule ukuthi, Njengoba usayizi wesikrini ukhula, ukulungiswa kufanele kukhuphuke. Akufanele wamukele noma yini engaphansi kwesinqumo esingu-1366 x 768 samalaptops aphathekayo angu-10 ukuya kwangu-13-intshi, noma 1920 x 1080 amakhompyutha aphathekayo angu-17 kuya kwangu-18.
Okwesibili, kufanele ukukhumbule lokho Kuwo wonke iyintshi yesikrini oyinyusayo, isisindo sekhompuyutha ephathekayo sizokhuphuka cishe ngamakhilogremu angu-0.45. Yiqiniso, kukhona okuhlukile, kukhona amamodeli alula futhi amancane aphula lo mkhuba. Mhlawumbe ufuna isikrini esibukhali nesikhulu kunazo zonke emakethe, kodwa uzimisele ukusiphatha esikhwameni sakho?
Yiziphi izici okufanele uzibheke?
Njengamagajethi amaningi obuchwepheshe, amakhompyutha aphathekayo avame ukuza nezici eziningi ongase uzidinge noma ungazidingi ngokuzenzakalelayo. Izici ezibalwe ngezansi yizinto okufanele ube nazo, lezo okufanele uzibheke lapho uthenga i-laptop yakho.
USB 3.0- Leli izinga lakamuva kubuchwepheshe bokudlulisa idatha ye-USB. Qiniseka ukuthi ikhompuyutha yakho ephathekayo inezimbobo okungenani eyodwa yalezi zimbobo ukuze ukudluliselwa kwefayela phakathi kwekhompyutha yakho ephathekayo bese, isibonelo, i-USB 3.0 flash drive kusheshe.
I-Wi-Fi ye-802.11ac- Kuze kube manje i-802.11n iwuxhumano lwe-inthanethi olungenantambo olushesha kakhulu, kodwa ngonyaka odlule amarutha angu-802.11ac avele. Uma uhlela ukusebenzisa ikhompuyutha ephathekayo yakho ukuze ubuke amavidiyo asakazayo noma ukulanda inani elikhulu lamafayela nokuqukethwe, kufanele ucabangele ukukhetha imodeli enalolo hlobo loxhumano lwe-Wi-Fi.
Isifundi sekhadi le-SD- Ngokusatshalaliswa kwekhamera ye-Smartphone ngokuthatha izifinyezo, abakhiqizi abaningi bamalaptop sebeqalile ukususa lesi sici kumamodeli abo, nokho-ke, uma ungumuntu othanda izithombe, ungase uphuthelwe umfundi wekhadi le-SD.
Isikrini sokuthintaYize ukufaneleka kwesikrini esithintwayo kukhompuyutha ephathekayo kuthandabuzeka okwamanje, ngeke sazi ukuthi ikusasa lizosiphatheleni. Nokho, isici esingenza isethi ibize kakhulu, ngakho-ke yihlole kahle ukuthi izoba usizo yini ngaphambi kokunquma.
Imibuzo okufanele uzibuze yona ngaphambi kokuthenga
Ngaphambi kokuba uphuthume uyothenga ilaptop ebukeka kahle kakhulu, kufanele uzibuze imibuzo elandelayo. Bazokusiza ukuthi unqume ukuthi yiluphi uhlobo lwe-laptop olulungele wena.
Uzoyisebenzisela ini i-laptop ngokuyinhloko?
Uma uzoyisebenzisela ukuhlola i-inthanethi, ubuke amavidiyo asakazayo futhi wenze amakholi wevidiyo nomndeni ngezikhathi ezithile, ngokuqinisekile uyoba nokwanele ngekhompyutha ukuze uyisebenzise okuvamile noma ngokomnotho. Uyathanda ukudlala? Unayo impendulo. Unyakaza kakhulu futhi udinga ilaptop ezacile nekhanyayo, zama i-Ultrabook. Ukuphendula lo mbuzo kuzohlale kukukhomba endleleni efanele.
Uyikhathalela kangakanani idizayini?
Kukhona amalaptop azo zonke izinhlobo, brand, amamodeli nosayizi - ingasaphathwa izendlalelo zopende noma izinto zokwakha. Uma ujwayele ukuklolodela idizayini embi yamakhompuyutha aphathekayo owabona eduze kwakho, mhlawumbe ufuna nje ikhompuyutha enekesi le-aluminium, noma okungenani ipulasitiki ethintwa kancane. Kodwa qaphela, umklamo ngokuvamile uyabiza.
Yimalini ongakwazi noma uzimisele ukuyisebenzisa?
Ekugcineni, lokhu kufanele kube i-barometer yakho eyinhloko lapho unquma ukuthi iyiphi i-laptop ongayithenga, akufanele neze usebenzise imali engaphezu kwalokho ongakwenza. Isabelomali sakho sizosho ukuthi yisiphi isigaba se-laptop oyithengayo.
Ingabe ufuna ikhompyutha ephathekayo eshibhile? Sitshele ukuthi ufuna ukusebenzisa malini
futhi sikubonisa izinketho ezingcono kakhulu
* Hambisa isilayidi ukuze ushintshe intengo
Kungenzeka awukaqapheli, kodwa i-laptop ibinathi iminyaka engu-30, nakuba ezinsukwini zayo zakuqala yayingaphezu nje komshini wokubhala wokuzenzisa. Emashumini eminyaka, amakhompyutha edeskithophu endabuko ahlinzeka ngamandla ekhompiyutha engeziwe, umthamo omkhulu wokugcina, kanye namamonitha angcono ngentengo ephansi. Maphakathi nawo-XNUMX, kwakuyinto evamile ukuba nekhompyutha ephathwayo, kodwa eminye imindeni yaqala ukubona izinzuzo zokuba nekhompyutha ephathekayo.
Ngokuhamba kwesikhathi, i-inthanethi ishintshile ukusuka kumamodemu okudayela kuya kumarutha angenawaya esinawo njengamanje, futhi ngokufana, ama-laptops abethuthuka ukuze ahlangabezane nezidingo zabasebenzisi ababedinga ukuhamba namakhompyutha abo. Yake yaba igajethi yosomabhizinisi, amabhange kanye nezempi, namuhla isiyithuluzi elibalulekile lawo wonke umuntu.
Njengoba ukuphatheka kuyinani eliyinhloko lekhompuyutha ephathekayo, lapho uhlola ukuthi iyiphi ikhompyutha okufanele uyithenge, kufanele ubhekisise ubukhulu bayo nesisindo sayo., ngaphandle kokukhohlwa iphrosesa yayo namandla ayo enkumbulo. Yize ama-laptops esimanje engasabi nesisindo esingaphezu kuka-9 kilos njengamadala, usengawubona umehluko phakathi kwemodeli engu-2.72 kg ne-1.84 eyodwa. Uma ungumfundi futhi uhlela ukuyisa i-laptop yakho ekilasini, kuzodingeka uyihambise ngobhaka noma esikhwameni futhi ngokuqinisekile uzobonga ukuthi imodeli encane, elula. Kodwa, ngakolunye uhlangothi, uma ungunjiniyela womsindo futhi uqopha ikhonsathi ebukhoma yeqembu lomculo, ozoyibuza ikhompuyutha yakho ukuthi ibe namandla ngangokunokwenzeka.
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zama-laptops. Ungasebenzisa ama-euro angamakhulu ambalwa kukhompuyutha ephathekayo eyisisekelo noma izinkulungwane ezimbalwa kukhompuyutha ephathekayo yokudlala esezingeni eliphezulu. Ngabanye ungakwazi kuphela ukungena kwi-inthanethi futhi ubhale ama-imeyili, kuyilapho abanye bekwazi ukusebenzisa izinhlelo zokuhlela ividiyo nezithombe ngaphandle kwenkinga. Uhlobo lwekhompyutha ephathekayo olukhethayo kufanele luhambisane nemisebenzi ohlela ukuyenza ngayo. Uyayidinga ukuze isebenze? Uyafuna ukubuka amamuvi noma izinhlelo zakho ze-TV eziyintandokazi kuyo? Ingabe ungumuntu ohlakaniphile noma uthanda imidlalo yevidiyo? Kulesi siqhathaniso selaptop sihlole amamodeli angcono kakhulu emakethe. Uma ufuna ukujula, ungafunda izindatshana zethu kumalaptop.
Iyiphi i-laptop engcono kakhulu kulesi siqhathaniso?
Impendulo yalo mbuzo ayilula futhi ayihlangene nama-laptops esiwabeke etafuleni lethu. I-laptop ehamba phambili yileyo ehlangabezana nezidingo ozifunayo futhi okungadingeki ukuthi iqondane nezomunye umuntu.
Ngenkathi ungase ubheke ikhompuyutha ephathekayo elula kakhulu emakethe ongahamba nayo yonke indawo, omunye umsebenzisi angase afune okuphambene.
Ngenxa yalesi sizathu, ekuqhathaniseni kwethu kwekhompuyutha ephathekayo sizame ukuhlangabezana nezidingo zazo zonke izethameli, ukubheja ngemodeli engcono kakhulu engxenyeni ngayinye maqondana nentengo yayo yekhwalithi.
Uma ungazi ukuthi iyiphi ikhompuyutha ongayithenga, sishiye amazwana futhi sizokusiza ukhethe evumelana nezidingo zakho kangcono.
I-laptop ekahle kuwe izoncika ngokuphelele ekutheni ziyini izidingo zakho, ukuthi uzoyisebenzisela ini. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi uhlu luyalwa ngentengo hhayi "ngekhwalithi".
Uma ufuna ikhompuyutha ephathekayo ongayisebenzisa ngezikhathi ezithile (njengokuhlola i-imeyili yakho, ukuhlola iwebhu, ukuvuselela izinkundla zokuxhumana, ukuhlela izithombe, ukubukela iNetflix noma wenze omunye umsebenzi wakho nge-Microsoft Office noma i-Google Amadokhumenti, ungagcizeleli ngama-Chromebooks ), Ngincoma kakhulu ukuthi ucabangele i-Chromebook. Bheka lawa aphezulu walo mhlahlandlela. Uma nangalokho, uphikelela ekuthengeni ikhompuyutha ephathekayo yeWindows, noma udinga okuthile okunamandla, ungakhetha enye yamakhompyutha esiwancome ekuqaleni.
Kulesi sihloko uzothola lezo ezinenani elingcono kakhulu lemali. Futhi uma ubheka kancane kuwebhu usebenzisa imenyu yokuzulazula nokunye uzobona ukuthi siphinde sibe neziqhathaniso nama-athikili aqondile kuye ngohlobo lwelaptop ofuna ukuyithenga. Ungase ufune ukubona ama-laptops amageyimu angcono kakhulu (omdlalo), noma i-laptop engcono kakhulu yomsebenzi, njll.
Njengoba ubona ohlwini, ngizokucacela ngokuphelele. Wonke ama-laptops ozowathola ngezansi ngamakhompyutha e-Windows. Futhi, ukukhuluma kahle, ngengeze amamodeli e-Windows engiwazonda kancane. Akukhona ukuthi amakhompyutha aphathekayo e-Windows mabi, kodwa ukuthi ngivame ukusebenzisa i-Chromebook engasetshenziselwa imisebenzi efanayo futhi, ngokuvamile, ashibhile (njengoba ubonile). Akusho ukuthi i-Apple Macbooks ayinayo indawo kulo mhlahlandlela 🙂
1 Amalaptop ashibhile angcono kakhulu
1.1 Izidili Zanamuhla Kumakhompyutha Aphathekayo Ashibhile
1.2.1 Amalaptops ngokwenani
1.2.2 Ama-laptops nge-processor
1.2.3 Amakhompyutha aphathekayo ngohlobo
1.2.4 Amakhompyutha aphathekayo ngomkhiqizo
1.2.5 Amalaptops ngokuya ngesikrini
1.2.6 Amalaptops ngokuya ngokusetshenziswa ofuna ukukunikeza
1.3 Amalaptops ashibhile angcono kakhulu ka-2021
1.3.1 I-CHUWI HeroBook
1.3.3 I-ASUS VivoBook 15,6-inch HD
1.3.4 I-HP 14
1.3.5 ILenovo Ideapad 530
1.4 Amalaptops ashibhile angcono kakhulu ngokuya ngokusetshenziswa kwawo
1.5 Izincomo ngaphambi kokuthenga
1.6 Ukuqhathaniswa kwamalaptops: Umphumela wokugcina
1.7 Izinhlobo zamaLaptops
1.7.2 Ama-laptops omdlalo
1.7.3 Amalaptops Wabafundi Nomsebenzi
1.7.4 Iziteshi zokusebenza
1.7.5 Amalaptop amabili kwenye (ama-hybrid)
1.7.6 Ama-laptops wokudlala
1.7.7 Ama-laptops anenhloso ejwayelekile
1.8 Ingcono encane noma enkulu?
1.9 Yiziphi izici okufanele uzibheke?
1.10 Imibuzo okufanele uzibuze yona ngaphambi kokuthenga
1.10.1 Uzoyisebenzisela ini i-laptop ngokuyinhloko?
1.10.2 Uyikhathalela kangakanani idizayini?
1.10.3 Yimalini ongakwazi noma uzimisele ukuyisebenzisa?
1.11 Yini esiyiqaphelile?
1.12 Iyiphi i-laptop engcono kakhulu kulesi siqhathaniso?
1.13 Isiphetho sokugcina
Ama-laptops we-Cyber ​​​​Monday
Amalaptop ashibhile 2022 - Inqubomgomo yobumfihlo - Imininingwane mayelana namakhukhi - contacto